Ny maresaka ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana (janoary 2006) · Global Voices teny Malagasy
Ny maresaka ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana (janoary 2006)
Voadika ny 05 Novambra 2018 4:09 GMT
Karim sy Marwen manoratra momba ny fanirian'izy ireo ho an'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana amin'ny taona 2006, taorian'ny taona goavana sy tsara ho an'ny bilaogy any Tonizia.
Adib manome ny heviny momba ny tontolon'ny bilaogy Toniziana tamin'ny taona 2005.
Hannibal namoaka sary sasantsasany nalainy tamin'ny fampiratiana tao amin'ny Mozea Brooklyn, NY: Tree of Paradise (Hazon'ny paradisa): Jewish Mosaics from the Roman Empire (Mozaika Jiosy avy amin'ny Empira Romana), izay mampiseho mozaika maromaro avy ao Tonizia.
Tunizika namoaka ny andiany faha-8 amin'ny fandraketam-peo mozika Toniziana, mampiseho mozika avy amin'i Sofyann Ben youssef, Ghalia Ben Ali & Temnaa, Kerkenah ary Amel Mathlouthi.
Mihevitra i Marwen fa mety ho safidy tena tsara amin'ny lasantsy ao Tonizia ny “bio-diesel”, satria miakatra hatrany ny vidin'ny lasantsy mifototra amin'ny solika.
Tunisian Globetrotter mitatitra fa hisokatra tsy ho ela ny fahitalavitra vaovao antsoina hoe “Sport 7″, izay handefa ireo lalao baolina kitra rehetra avy amin'ny lalao Toniziana. Mbola mandeha ny fifampiresahana eo amin'ny manampahefana Toniziana sy ny ART momba ny antsipirian'izany.
Zizou manoratra momba ny fifandraisana misy eo amin'i Tonizia sy i Italia, ary ny fomba nametrahana ny fifamatorana eo amin'ny firenena roa tonta rehefa tonga tao Tonizia ny fantsona Italiana RAI1 tamin'ny taona 1967. Mahita izy fa mifanalavitra ireo firenena nandritra ny taona vitsy, ary mihevitra fa ny mifanohitra amin'izany dia tokony hitranga, indrindra noho i Italia mila mpiasa vahiny sy Toniziana manana toerana tsara hamenoana ireo banga ireo.
OthRez manoratra lahatsoratra mahaliana momba ny famindrana/offshoring amin'ny ankapobeny ary mandray ny ohatra ao Tonizia izay ahitana ireo orinasan-damba sy ny teknolojia vaovao avy any Eoropa mametraka ivontoerana famokarana, miresaka ny voka-dratsy sy ny tombontsoa amin'izany rehetra izany.
Ex-Blonde manoratra ny zava-niainany tamin'ireo sinemà Toniziana; ny fisafidianana madinika sy fahiny amin'ireo sarimihetsika, ny sinemà malaza ratsy, ny trano teatra foana, ny faharatsian'ny kalitaon'ny sary sy ny feo, sns. Mahita izy fa tsara kokoa ny mijery sarimihetsika DivX piraty amin'ny solosaina ao an-trano.